နမီးဘီးယားနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 22°S 17°E﻿ / ﻿22°S 17°E﻿ / -22; 17
နမီးဘီးယားနိုင်ငံသည် အာဖရိကတောင်ပိုင်းတွင် ရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အနောက်ဘက်တွင် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ နှင့် ထိစပ်လျက် ရှိသည်။ မြောက်ဘက်တွင် အင်ဂိုလာနိုင်ငံ နှင့် ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဘော့ဆွာနာနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တွင် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ တို့နှင့် ထိစပ်လျက် ရှိသည်။ နမီးဘီးယား လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲအပြီးတွင် ၁၉၉၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်တွင် တောင်အာဖရိကမှ လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့သည်။ မြို့တော်မှာ ဝင်းဒေါ့ခ်မြို့ ဖြစ်သည်။ နမီးဘီးယားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ တောင်အာဖရိက ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၊ အာဖရိက သမဂ္ဂ နှင့် ဓနသဟာယ နိုင်ငံများ အဖွဲ့တို့၏ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
ဆောင်ပုဒ်: "ညီညွတ်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေး၊ တရားမျှတမှု"
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "နမီးဘီးယား၊ ရဲရင့်သူတို့တိုင်းပြည်"
၈.၀% Coloured (including Baster)
ပြည်ထောင်စု ကြီးစိုးပါတီ တစိတ်တပိုင်းသမ္မတစနစ် ဖွဲ့စည်းပုံ သမ္မတနိုင်ငံစနစ်
၁၉၉၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက်
၁၉၉၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်
၈၂၅,၆၁၅ km2 (၃၁၈,၇၇၂ sq mi) (အဆင့်: ၃၄)
၂,၅၅၀,၂၂၆ (အဆင့် - ၁၄၀)
၃.၂/km2 (၈.၃/sq mi) (အဆင့် - ၂၃၅)
အလယ် · ၁၃၀
တောင်အာဖရိက ရန်ဒ် (ZAR)
↑ Communal Land Reform Act, Afrikaans။ Government of Namibia။ 25 February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Communal Land Reform Act, German။ Government of Namibia.။9October 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Communal Land Reform Act, Khoekhoegowab။ Government of Namibia။ 25 February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Communal Land Reform Act, Otjiherero။ Government of Namibia။[လင့်ခ်သေ]
↑ Communal Land Reform Act, Oshiwambo။ Government of Namibia။ 1 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Communal Land Reform Act, Rukwangali။ Government of Namibia။ 25 February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Communal Land Reform Act, Setswana။ Government of Namibia။ 25 February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Communal Land Reform Act, Lozi။ Government of Namibia။ 25 February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shugart, Matthew Søberg (September 2005). "Semi-Presidential Systems: Dual Executive and Mixed Authority Patterns". Graduate School of International Relations and Pacific Studies. United States: University of California, San Diego. Archived 19 August 2008 at the Wayback Machine.
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ Shugart, Matthew Søberg (December 2005). "Semi-Presidential Systems: Dual Executive And Mixed Authority Patterns". French Politics3(3): 323–351. doi:10.1057/palgrave.fp.8200087. “Of the contemporary cases, only four provide the assembly majority an unrestricted right to vote no confidence, and of these, only two allow the president unrestricted authority to appoint the prime minister. These two, Mozambique and Namibia, as well as the Weimar Republic, thus resemble most closely the structure of authority depicted in the right panel of Figure 3, whereby the dual accountability of the cabinet to both the president and the assembly is maximized. (...) Namibia allows the president to dissolve [the assembly] at any time but placesanovel negative incentive on his exercise of the right: He must stand foranew election at the same time as the new assembly elections.”
↑ Census data။
↑ ၁၂.၀ ၁၂.၁ ၁၂.၂ ၁၂.၃ Report for Selected Countries and Subjects။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နမီးဘီးယားနိုင်ငံ&oldid=726387" မှ ရယူရန်
၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။